မုတ်ဆိတ်မွေး ထားသော အနုပညာရှင်များ၏ အနုပညာဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မုတ်ဆိတ်မွေး ထားသော အနုပညာရှင်များ၏ အနုပညာဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ပင်
မုတ်ဆိတ်မွေး ထားသော အနုပညာရှင်များ၏ အနုပညာဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ပင်
Posted by စနေ on Dec 3, 2010 in Myanma News, News | 12 comments
မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးများ ထားရှိသည့် အနုပညာရှင်များအား အနုပညာဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပိတ်ပင်ခံရသည့် အနုပညာရှင်များမှာ ကိုရဲလွင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ကျားပေါက်၊ အနဂ္ဂ၊ သံသာဝင်း၊ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)၊ မင်းထင်ကိုကိုကြီး၊ ချိုတူးဇော်၊ ကျော်သူ၊ ရွှေဇီးကွက်၊ နှင့် သန်းမြင့်အောင်တို့ ဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှာ မုတ်ဆိတ်မွေး နှုတ်ခမ်းမွေးထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး၊ အချို့မှာ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေး၊ ပါးသိုင်းမွေး မရှိသော်လည်း၊ အဆိုပါ အမွေးများ ထားရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း စသည့် အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သတင်းကြောင့် မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေးထားရှိသည့် အချို့အနုပညာရှင်များသည်
သူတို့၏ အမွေးများ အားလုံးကို အလျင်အမြန် ရိတ်သိမ်းလျက် ရှိနေကြကြောင်း သိရပြီး၊ အချို့မှာမူ ဆက်လက်ထားရှိကြကြောင်း သိရသည်။ မုတ်ဆိတ်မွေးများကို ကျစ်ဆံမြီး ကျစ်ထားပြီး တသသ ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည့် တယောဦးတင်ရီမှာမူ ဤသတင်းကြောင့် လောလောဆယ် မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်ရမည် မသိ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်း အသေးစိတ် ဖတ်ရှုရန်
mee lay has written 40 post in this Website..
View all posts by စနေ →
ပါးသိုင်းမွေးနဲ့ .. မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ ခန့်ခန့်ငြားငြားကြီး ဆိုတာ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ
(မှတ်ချက် ။ ။ မူဆလင်မှ မုတ်ဆိတ်ထားတာ မဟုတ်ပါ)
မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်နော် ဟိုတစ်ခါ သွားလှူဒါန်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်မယ် ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကြားတာ အနော်ရထာမင်းက မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ်ထားတဲ့ အရည်းကြီးရဟန်းတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အောင်ပွဲခံသလို တပ်ရှုပ်ကြီးကလည်း ပုံစံတူလိုက်လုပ် မလို့တဲ့။ တရုပ်သိုင်းကားတွေ အထဲမှာတောင် မုတ်ဆိတ်မွှေးပါတဲ့ သိုင်းဆရာကြီးတွေ အခန်းဆို ဆင်ဆာဖြတ်မယ်တဲ့။
hahaa တော်တော်ရီရတဲ့ သတင်းပဲ
တကယ်ပဲ မုတ်ဆိတ်ကြောင့်လား ???
စာကိုအဆုံးထိမဖတ်ဖြစ်တော. သံသာဝင်းပါ မုတ်ဆိတ်ထားတယ်ထင်မိတယ် မီးလေး ရေ
har: har: har: :))))))))))))))))))
တကယ်လို. သူ.ကိုလာပိတ်ပင်လို.ရှိရင် ဒီလိုပြောလိုက်လို.
“ကျွန်တော်က တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်လို. ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားတာ၊ ဒီ.ပြင်နေရာမှာသိပ်မရှည်လို. ရှည်တဲ့နေရာကိုပဲ ကျစ်ဆံမြီးထားတာ” လို.
ဟင် … မုတ်ဆိတ်မွှေးထားလို့ ဟုတ်လို့လား ၊။ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်နော် … နောက်နေတာလားဟင် …. ;)
ဟီးဟီး … ဒင်းတို့ လုပ်တာနဲ့ ဘာအမွေးမှကို အရှည်မထားရဲတော့ဘူး
သံသာဝင်း၊ ရွှေဇီးကွက်၊ သန်းမြင့်အောင်တို့ ကတော့ မုတ်ဆိတ်မွှေး မထားပေမယ့် မုတ်ဆိတ်မွှေး ထားရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ကြောင့်ပေ့ါနော်။
မသံသာဝင်း၊ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်၊ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တို့ ကတော့ မုတ်ဆိတ်မွှေး မထားပေမယ့် မုတ်ဆိတ်မွှေး ထားရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ကြောင့်ပေ့ါနော်။